Nagu saabsan - Hebei TUBO Makiinado Co., Ltd.
Hebei TUBO Makiinado Co., Ltd. soosaara alxanka ERW Tube Mill / tuuboyinka Mill, LSAW (JCO) Pipe Mill, Roll Cold U samaynta Machine iyo Khadka Line, iyo sidoo kale qalab caawiya in ka badan 15 sano, waxaan ku horumarinay kuna barbaarnay si waafaqsan shuruudaha suuqa ee joogtada ah.
Iyadoo morden software design iyo in ka badan 130 ayaa dejisa dhamaan noocyada qalabka makiinada CNC, Mashiinnada TUBO waxay si isdaba joog ah u horumarinaysay una xoojinaysay aqoonteeda berrinka waqtigeeda.
TUBO sayid tiknoolajiyada ugu dambeysa ee Isticmaalka Isticmaalka Isticmaalka 'ROL' ee dunida, sameynta FF, sameynta FFX, oo si toos ah ugu sameysmaya fagaaraha, iwm Ka dib xisaabinta la safeeyey ee cabbirka iyo wax soo saarka codsiyada iibsadaha, waxaan qaabeyn karnaa mashiinka tuubbada / tuubbada kaas oo keydinaya wadarta maalgashiga ilaa ugu badnaan.
Mashiinnada TUBO waxay ku guuleysteen khadad badan oo wax soo saar gudaha iyo dibaddaba ah oo ka mid ah mashiinnada dhuumaha mideysan, mashiinnada duubista qabow iyo khadadka jeexjeexa oo sumcad iyo tayo wanaagsan leh Mashiinadayada ayaa loo dhoofiyay Chile, Colombia, Mexico, Ecuador, Russia, Albania, Turkey, Iraq, Iran, Cyprus, Syria, Uganda, Angola, Ethiopia, Vietnam, Cambodia, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan iwm.
Mashiinka TUBO ma aha oo kaliya soosaarida mashiinada TAYO SARE, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan adeeg farsamo iyo adeeg iib ah kadib. Dhanka kale, kala duwanaanta alaabtu waxay u hoggaansami kartaa shuruudaha iyo codsiyada isticmaalayaasha.
Mashiinka TUBO, oo ah lammaane adeegsadayaal ah, wuxuu siiyaa meel walba & waqti kasta injineernimo tayo sare leh iyo taageero farsamo, macluumaad, fikrado iyo adeegyo ugu macquulsan. Guusha adeegsadayaasheeda waxay keeneysaa guusha Mashiinka TUBO.
Mashiinka TUBO - U Samee Qiime Isticmaalayaasha!
Koonfurta Ameerika Galbeedka Yurub Bariga Aasiya Bariga Dhexe Afrika Oceania
Shirkadda Ganacsiga Soo Saaraha
Tirada shaqaalaha: > 236
Iibinta Sanadlaha: > 25 milyan
Sanadka la Aasaasay: 1997
Dhoofinta pc: <10%
1. Adeeg horay loo sii iibiyay
Injineerada TUBO MACHINERY waxay si taxaddar leh u falanqeeyaan shuruudaha isticmaalaha, si loo hubiyo in dhammaan dalabaadka loo fulin karo si waafaqsan.
2. Rakibaadda iyo hawlgelinta
Rakibaadda-furaha rakibaadda iyo ku shaqaynta mashiinnada tuubbada oo dhammaystiran, khadadka jeexjeexa, mashiinnada duudduuban ee samaysmaya;
Kormeerka rakibaadda iyo hawlgelinta;
Tababar loogu talagalay farsamayaqaannada / shaqaalaha inta lagu jiro hawlgalka;
Ku shaqeynta mashiinka muddada-dheer, haddii la codsado;
3. Taageerada iibka kadib
MAKIINADDA TUBO waxay macaamiisha siin karaan adeegyo kaamil ah iibka kadib. Ka dib rakibidda iyo hawlgelinta, tababar farsamo oo dhammaystiran ayaa la siin doonaa hawl wadeennada iyo shaqaalaha dayactirka. Farsamo yaqaan adeegga iibka kadib wuxuu hayn doonaa diiwaan faahfaahsan oo ku saabsan macluumaadka macaamiisha iyo xaaladda qalab ee macaamilka, oo wuxuu samayn doonaa casriyeyn xilliyeed iyo dabagal xidhan oo loo maro. Hadday su'aal kasta jirto, injineerkeenna dayactirka ayaa ka jawaabi doona la-talinta taleefankaaga saacad kasta, wuxuu ku siinayaa xalal farsamo si dulqaad leh oo taxaddar leh, wuxuuna tilmaamo siinayaa hawl wadeenka ama shaqaalaha dayactirka.
4. Taageerada Burburka
Injineero xirfad iyo khibrad u leh TUBO MACHINERY ayaa diyaar u ah inay la tacaalaan nooc kasta oo burburka ah.
Caawinaad farsamo oo degdeg ah iyo talo taleefan iyo / ama emayl;
Adeeg farsamo oo lagu sameeyo goobta Macaamiisha, haddii loo baahdo;
Qalabka degdegga ah ee qalabka farsamada iyo elektarooniga ah;
5. Dib u habeyn iyo casriyayn
MAKIINADDA TUBO waxay leedahay khibrad ballaadhan oo ku saabsan casriyeynta, cusboonaysiinta ama cusboonaysiinta milkiilayaasha tuubbada da'da. Nidaamyada xakamaynta waxay noqon karaan kuwo taariikhsan oo aan la isku halleyn karin sannado badan oo duurka ka dib. Waxaan awoodnaa inaan soo bandhigno ugu dambeyntii PC, PLC iyo xulashooyinka xakamaynta ku saleysan CNC. Farsamooyinka iyo nidaamyada la xiriira ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara dib-u-habeyn ama beddel, taasoo siineysa adeegsadaha badeecad tayo fiican leh iyo howl lagu kalsoonaan karo oo ka socda mashiinkooda.
Waxaan, Hebei TUBO Makiinado Co., Ltd., soo saarista iyo dhoofinta welded tube / biibiile, mashiinka duudduuban qabow sameynta iyo khadka kala, iyo sidoo kale qalab kaabayaal ah in ka badan 16 sano, waxaan horumarinay oo ku soo kornay si joogto ah shuruudaha suuqa. .
Iyadoo in ka badan 130 ay dejineyso dhammaan noocyada qalabka makiinadaha CNC, in ka badan 200 oo shaqaale ah, Qiyaas. 45,000 mitir murabac oo aagga sagxadda ah, Mashiinka TUBO wuxuu si isdaba joog ah u horumarinayay una xoojinayay aqoontiisa berrina waqtiga. Beddelidda iyo u hoggaansamida codsiyada macaamiisheeda, shirkaddu waxay tixgelinaysaa macaamiisheeda mudnaanta leh ee la-hawlgalayaasha lagu kalsoonaan karo oo aad u fiican.
Alaabtayadu Waxay Dhaaftay Shahaadooyin Badan.
Arag inbadan oo nagu saabsan